Moto Z Play, famakafakana ary hevitra | Androidsis
Alfonso de Frutos | | Motorola, hevitra
Ny fahatongavan'ny marika Lenovo amin'ny tari-dalan'ny Motorola dia namela ny Amerikana Avaratra hanohy hitazona ny filozofia momba ny vidin'ny atiny sy ny rindrambaiko kalitao. Ary ny tsipika Moto avy amin'i Lenovo dia ohatra iray amin'izany.
Androany no itondrako anao a fanadihadiana feno amin'ny Moto Z Play, fitaovana miloka amin'ny endrika maodely ary misy tsy ampoizina tena mahaliana.
2 Toetra ara-teknikan'ny Moto Z Play
3 Takelaka iray izay mihoatra ny mahafeno ny antenaina antenantenany
4 Moto Mod, manandrana ny mpandahateny JBL SoundBoost
5 Batterie tsy mety ritra
7 Sary nalaina tamin'ny fakantsary Moto Z Play
Ny fananganana ny lalao Moto Z dia tsy isalasalana fa ny fanomezan-dàlana lehibe an'ny terminal ary toerana nanaovan'ny marika fiezahana mafy indrindra ka ny fananana azy eny an-tànana dia manome fahatsapana tena mahafinaritra. Ary mahomby.
Miresaka momba ny telefaona natsangana manodidina ny chassis izahay unibody metaly mifarana amin'ny a endriny avo lenta vita amin'ny sandblasted. Ny farany vita dia matanjaka, miaraka amin'ny roa cristales Gorilla Glass apetraho eo aloha sy eo aoriana ny iray, izay manome fanoherana lehibe ny fikorontanana sy ny fianjerana.
Araka ny nolazaiko, ny fahatsapana eo an-tànana dia tena tsara ary mampiseho ny asa tsara vitan'ny Motorola amin'ity lafiny ity. Mazava ho azy, ny habeny dia tsy voatsabo tsara satria manana efijery 5.5-inch, lehibe ny telefaona(156.4 x 76.4 mm) miisa amin'ny fefy ambany midadasika, izay misy ny mpamaky ny dian-tànana.
Eny, ry zareo 7mm matevina ataon'izy ireo terminal tsara dia tsara izy ireo. Ho fanampin'izany, ny lanjany 165 grama dia mahatonga ny Moto Z Play tsy hanelingelina ny tanana aorian'ny ora vitsy ampiasaina.
Asongadino izany ny Moto Z Play dia manana mpandahateny eo aloha Tena tsara izany, acmpampitohy an'ny Moto Mods eo amin'ny farany ambany, mpampitohy USB Type-C azo avadika ary ny jack audio 3.5mm mahazatra eo ambany.
Amin'ny ankapobeny, a endrika madio izay mampiseho ny asa tsara ataon'ny mpanamboatra amin'io lafiny io, manome ny Moto Z Play famaranana kalitao izay mahatonga ny telefaona vaovao amin'ny zotra Moto Z ho safidy tena irina.
Toetra ara-teknikan'ny Moto Z Play
lafiny 156.4 x 76.4 x 7 mm
lanja Gramin'ny 165
efijery IPS 5.5 santimetatra miaraka amina vahaolana 1.920 x 1.080 teboka ary 401 dpi
processeur Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 miaraka amina core 53 GHz Cortex A2.0
Fakan-tsary aoriana 16 megapixels miaraka amin'ny f / 2.0 27 / OIS / autofocus / detection face / panorama / HDR / Dual LED flash / Geolocation / 1080p fandraisam-peo amin'ny 30fps
Fakan-tsary mialoha 5 MPX / horonan-tsary ao amin'ny 1080p
Conectividad DualSIM Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / dual band / Wi-Fi Direct / hotspot / Bluetooth 4.0 / FM radio / A-GPS / GLONASS / BDS / GSM 850/900/1800/1900; Tarika 3G (HSDPA800 / 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 - tarika NXT-L29 NXT-L09) 4G (1 (2100) 2 (1900) 3 (1800) 4 (1700/2100) 5 (850) 6 (900) 7 (2600) 8 (900) 12 (700) 17 (700) 18 (800) 19 (800) 20 (800) 26 (850) 38 (2600) 39 (1900) 40 (2300) - NXT -L29) / HSPA hafainganam-pandeha 42.2 / 5.76 Mbps ary LTE Cat6 300/50 Mbps
Fitaovana hafa rafitra famerenam-bidy haingana / sensor Fingerprint / Seranan-tsambo C / Fantsona nano tsy tantera-drano (mahatohitra splash) / mifanaraka amin'ny Moto Mod
bateria 3.510 mAh tsy azo esorina
vidiny Amidy amin'ny Amazon ihany 379 euros fipihana eto
Miaraka amin'ity fanaingoana ity, izay efa hitantsika tamin'ny fitaovana hafa, dia miatrika ambaratonga afovoany izay mihoatra ny fanomezana ny filan'ny mpampiasa rehetra izahay. Rehefa avy nanandrana azy nandritra ny iray volana aho dia afaka manamarina fa ilay terminal miasa tena milaminaTsy mijaly noho ny totohondry izy ary, araka ny hitanao tamin'ny fandinihanay ny horonan-tsary, ny Moto Z Play dia afaka mamindra lalao, na toy inona na toy inona angovo ilainy, tsy misy olana lehibe.
Mandeha haingana sy milamina Android 6.0 ity fitaovana ity, manome fahombiazana tsara amin'ny lafiny rehetra. Ndeha ho tadidintsika koa izany Motorola dia manolo-tena amin'ny fanaingoana farafahakeliny, zavatra tiako manokana ary ataoko tsara ny terminal ary tsy misy rindran-junk fampiharana.
Ny mpamaky dian-tanan'ny Moto Z Play mandeha tsara izy io, manolotra famakiana rantsantanana haingana sy marina. Mazava ho azy, toa ahy fa kely loatra ny habeny, indrindra raha jerentsika ny habaka eo ambanin'ny farany eo anoloana ilay fitaovana. Heveriko fa amin'ity lafiny ity dia tokony ho mpamaky biometrika lehibe i Motorola.
Takelaka iray izay mihoatra ny mahafeno ny antenaina antenantenany
Motorola dia mirona amin'ny filokana amin'ny vahaolana Samsung mba hanome fiainana ny terminal ao aminy ary ny Moto Z Play dia ohatra iray vaovao amin'izany. Mazava ho azy fa tsy maintsy nampihena ny vidiny ianao ary hiala amin'ireo takelaka QHD 1.440p, fa na izany aza ny efijery izay napetraky ny Moto Z Play dia tena tsara.
Ap no resahikoTontonana Super AMOLED 5.5-inch miaraka amina vahaolana feno 1080 XNUMX py izay mamela 41 hakitroka isaky ny santimetatra ny hakitroky, izay adika amin'ny traikefan'ny mpampiasa tena tsara.
Ireto takelaka ireto dia mihoatra ny fantatry ny rehetra, fa ho an'ireo izay tsy mahalala an'ity teknolojia ity dia lazao izany Ny efijery Super AMOLED dia manome antoka loko mazava be amin'ny famirapiratana miavaka ary zoro fijerena tsy hita fetra, ary koa ny tonony mainty lalina indrindra izay azo tratrarina amin'ny finday avo lenta.
Ny milaza izany tena tsara koa ny fotsy ary, amin'ny ankapobeny, manome terminal mazava tsara ilay terminal. Azontsika atao koa ny manamboatra ny haavon'ny saturation mifanaraka amin'ny tsirontsika.
Any ivelany lmandeha tsara ny écran, mamela ny atiny hojerena amin'ny tontolo mamirapiratra, ankoatran'ny Motorola's Ambient Display dia mamela ny fotoana sy ny fampandrenesana aseho amin'ny efijery ary mandany loharano kely izy io noho ny teknolojia ampiasaina ao amin'ny tontonana.
Moto Mod, manandrana ny mpandahateny JBL SoundBoost
Ny iray amin'ireo singa mampiavaka indrindra ny tsipika Moto Z dia miaraka amin'ny Moto Mod. Ary io dia, amin'ny endrika Project Ara madio indrindra, ny mpanamboatra dia nampiditra mpampifandray ao ambadiky ny fitaovana hampifandray ireo peripheraly samihafa. Niezaka ny mpandahateny JBL Sound Boost ho an'ny Moto Z aho ary nahagaga ny vokany.
Mikasika ny endrika, ny JBL Sound Boosmanana famolavolana tena manintona ary famaranana tena premium. Sombiny iray izay tiako dia ny miaraka amina sombin-javatra izay manohana antsika manasa mankafy atiny multimedia na lalao video amin'ny orinasa.
Ny antsipiriany iray hafa dia miavaka miaraka amin'ny fananan'ny mpandahateny JBL a bateria manokana Ka tsy handany ny baterian'ny Moto Z na Moto Z Play-tsika fa singa samy hafa izy ireo.
Ny kalitaon'ny feo dia tsara dia tsara, mihoatra ny zava-bita tamin'ny mpandahateny hita eo aloha, fa ny lanjany 115 grama sy maro hafavidiny lafo be (89 euro) ianao dia mahatonga ny mpampiasa mihoatra ny iray hieritreritra indroa.
Batterie tsy mety ritra
Ny tanjaka lehibe hafa, miaraka amin'ny endriny mahafinaritra, dia tsy isalasalana fa ny fizakan-tenan'ity terminal ity. Ny Moto Z Play mitaingina a 3.510 mAh bateria tsy azo esorina.
Fantatsika fa miaraka amin'ity bateria ity ny Moto Z Play dia mety hanolotra fampisehoana tsara, miampy ny fahatongavany ao anaty boaty charger TurboPower izay, raha ny filazan'ny mpanamboatra, dia mitaky fahaleovan-tena maharitra 9 ora ao anatin'ny 15 minitra fotsiny rehefa tafiditra.
Mampalahelo fa manana charger USB Type C ny charger ka tsy hanana tariby mamela ny fampifanarahana amin'ny PC izahay. Miverina amin'ny fizakan-tena, lazao izany Afaka nampiasa telefaona tsy nisy olana aho nandritra ny 2 andro misesy, zavatra izay tratran'ny terminal vitsy an'isa.
Rehefa nomeko fampiasana mahery vaika kokoa izy, ny Moto Z Play dia niaritra iray andro sy sasany tsy nisy olana, noho izany dia azoko lazaina fa ny zava-bitany tamin'ity lafiny ity dia mihoatra ny marina, mihoatra ny ankamaroan'ny mpifaninana aminy.
Farany dia miditra amin'ny faritra fakantsary izahay. Ary eny, ny mpanamboatra dia nahavita asa tsara tamin'ity fizarana ity ihany koa. ny Fakan-tsary megapixel 16 miaraka amina flash misy feon-droa Fisamborana tena tsara raha mbola ao anaty tontolo mazàna isika.
Ety anaty sy miaraka amin'ny fanampian'ny tselatra dia afaka maka sary tsy misy tabataba be loatra isika, fa rehefa manandrana maka sary sary amin'ny alina isika dia hahita ilay tabataba atahorana.
Ny rindrambaiko fakan-tsary dia manana asa samihafa, toy ny mode manual hahafahantsika manitsy ny masontsivana rehetra momba ny fakantsary Moto Z Play, toy ny fifandanjana fotsy na ny haavon'ny ISO, saingy interface tsara be izy io, ilay iray tonga amin'ny Android madio.
Sary nalaina tamin'ny fakantsary Moto Z Play
Ny Moto Z Play dia voaorina tsara. dia telefaona hisarika ny endrika maro ary manana fitaovana tsara izy io ary manana fahaleovan-tena ambonimbony kokoa noho ny antonony. Io ve ny elanelam-potoana ambony ambony indrindra eny an-tsena? Momba ny tsiro, ny loko, saingy azo antoka fa ao amin'ny top 3 izy io.
Fampisehoana Super AMOLED
Traikefa Android 100%, tsy misy soritra bloatware
Famaritana habe / efijery tafahoatra
Tsy mahatohitra vovoka sy rano
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Motorola » Moto Z Play, fanadihadiana ary hevitra
YouTube for Android dia havaozina amin'ny bara fitetezana ambany vaovao
Hanambara ny finday avo lenta manaraka azy ny Motorola rahampitso 1 jona